I-Slim Glass Door Handle Lock Solutions - I-Zhongshan City YALIS Hardware Products Co., Ltd.
Izixazululo ze-Slim Glass Door Handle Lock Lock
Ngokuduma kwezitayela ze-minimalist, iminyango yengilazi yohlaka oluncane iya ngokuya ithatha isikhundla esijwayelekile emakethe yokuthuthukiswa kwekhaya ngenxa yokubonakala kwayo okuvelele kanye nomuzwa ophezulu.
Kodwa-ke, izingidi zomnyango wengilazi emakethe zinzima ukufanisa nezicabha zengilazi zohlaka oluncane.Ngocwaningo oluningi lwemakethe, i-YALIS ifunde ukuthi amakhasimende omnyango wengilazi ozimele omncane ahlangabezane nezinkinga ezifana nesakhiwo sangaphakathi esingalungile, izinketho ezimbalwa, nezitayela ezingenakuqhathaniswa nokunye.Ngalezi zizathu, i-YALIS ihlanganisa ukusebenza nobungcweti bokhiye wesibambo seminyango yengilazi kanye neminyango yengilazi yohlaka oluncane, okugcina ukubonakala nomuzwa osezingeni eliphezulu usezingeni eliphezulu.
I-MULTIPLICITY nezinsimbi zengilazi zenziwa ngephrofayili ye-aluminium futhi zicutshungulwa yimishini ye-CNC.Akukhona nje ukunemba kwezesekeli okuphakeme, kodwa futhi kungenziwa isiphetho esifanayo njengohlaka lweminyango yengilazi yefreyimu emincane, ukuze izibambo zomnyango weglasi kanye neminyango yeglasi ingafinyelelwa umphumela ohlangene.
1. Isakhiwo se-clutch esinelungelo lobunikazi singanqanda ukuvuleka okunodlame futhi sivimbele izibambo ukuthi zingalengi phansi.
2. I-MULTIPLICITY ifaniswe nelokhi yamagnetic latch, inganciphisa umsindo lapho isibambo sesicabha sivulwa futhi sivalwa.
3. Ifanele izicabha ezicwebezelisiwe kanye nezicabha ezicwebezeliswe kabili.
4. Ikesi lesiteleka elilungisekayo linganciphisa ubunzima bokufaka.
Ngokuthandwa kweminyango yengilazi yefreyimu emincane, abakhiqizi abaningi beminyango yeglasi benza imikhiqizo yabo ihambisane nezintandokazi zabathengi, kodwa ngesikhathi esifanayo bayothola ukuthi i-hardware yomnyango ayikwazi ukwenza imikhiqizo yabo ibe nokuncintisana futhi ibe nenzuzo.Ngakho-ke, i-YALIS ithuthukise uchungechunge lwengilazi yokukhiya isibambo seminyango yengilazi ye-GUARD yeminyango emincane ecwebezelwe eyodwa.
1. I-GUARD ifaniswe nelokhi yamagnetic latch, yenza ukuvuleka komnyango kuthule kakhudlwana.
2. Izinto ezibonakalayo ziyiphrofayili ye-aluminium, engenziwa ekugcineni okufanayo nohlaka lomnyango weglasi.
3. I-rosette ingenziwa ngokwezifiso ngokusho kobukhulu befreyimu yesicabha seglasi ukuze ihlangabezane nezidingo zamakhasimende.
4. Ifanele izicabha ezicwebezelisiwe.
A: I-Glass Splint+YALIS Izibambo Zomnyango
90mm Square Glass Splint+YALIS Izibambo Zomnyango
1. Izinto ezibonakalayo ziyi-zinc alloy.
2. Ifanele izicabha zengilazi ezicwebezelisiwe kanye nezicabha ezicwebezeliswe kabili.
3. Umsebenzi wobumfihlo kanye nomsebenzi wokungena ungakhethwa.
B. B Glass Splint+YALIS Izibambo Zomnyango
1. Ukuphonswa kwengilazi kunemicu yerabha eyakhelwe ngaphakathi ukuvikela ingilazi engcolile.
2. Ifanele izicabha ezicwebezelisiwe kanye nezicabha ezicwebezeliswe kabili.
3. Ingafaniswa zonke izibambo zeminyango ye-YALIS.
4. Umsebenzi wobumfihlo kanye nomsebenzi wokungena ungakhethwa.
5. Yayihambisana nelokhi yamagnetic mortise ethule.